Sintomy F-14D Tomcat + Tahiti scenery + mpitatitra fiaramanidina Glenn USS FS2004
F-14D Tomcat + Tahiti toerana tsara tarehy + fiaramanidina mitondra Glenn USS FS2004 HOT
Fiaramanidina tena tsara ho an'ireo mpankafy video! Ny Tomcat F-14d dia miakatra avy eo aorian'ny fanilo sy ny rindrina ny vokatra feo. Miresaha amin'ny fomba fijery ivelany ary tandremo ilay bango rehefa mandalo ny sakana! Ny telegrama amin'ny fiaramanidina fiaramanidina dia miasa. Ny fiaramanidina dia mijanona ao anatin'ny 10 metatra miaraka amin'ity rafitra ity. Ny Catapult dia mety manosika anao amin'ny toerana lavitra. Feo tsy mahazatra ho an'ny F14, ny auto-pilot dia eo amin'ny farany ambony havia mankany amin'ny fitaratra (click on the icon provided).
Ity fiaramanidina ity dia misy amin'ny valiny 8 noho ny fahafinaretanao.
Atorao koa ity add-on, ny nosy Tahiti sy ny mpitatitra fiaramanidina USS Glenn.
Mialà amin'ny fiantohana fiaramanidina any amin'ny faritra afovoan'ny seranam-piaramanidina Glen avy eo amin'ny varavarankely "Select airport"
Mialà eny amin'ny seranam-piaramanidina ao Tahiti any amin'ny seranam-piaramanidina ID NTAA avy eny amin'ny seranam-piaramanidina "Select airport"
Raha te hanidina ny F-14 ianao dia tsy maintsy mifidy ny mpanamboatra Grumman avy amin'ny lisitry ny fiaramanidina
Fanambarana momba ny fahitana Tahiti ao amin'ny tranombokin'i FSX dia mandeha ho azy.
izany add-on dia TOKOA TOKONY fa aza atao ahoana. Amin'ny lafiny iray, ny fiaramanidina dia manana brakes toa an'io ka afaka miditra amin'ny seranam-piaramanidina kely indrindra eto an-tany. Fanatonana: 120-130 antsy. Aza manao fomba mahazatra. Miandrasa ny fotoana farany manaikitra ny faran'ny tady amin'ny 120-130 antsy.
Etsy ankilany kosa dia manana hery toy izany ny fiaramanidina ka afaka mahatratra haingana be. Tonga haingana ny rindrin'ny feo.
Be dia be ny mankafy. Good flight!
Downloads 43 043
Nohavaozina taminy 30-12-2012